पत्रकार शाह माथि प्रहरीको दुर्व्यबहार – Palika Times
पत्रकार शाह माथि प्रहरीको दुर्व्यबहार
पालिका टाइम्स ३ असार २०७८, बिहिबार प्रकाशित
३ असार, काठमाडौं । प्रहरीले रिपोर्टिङमा रहेको पत्रकारहरू माथि दुर्व्यवहार गरेको छ । बिहीबार बिहानै रिपोर्टिङमा रहेका देशदैनिक डटकमका सञ्चालक पारस विक्रम शाहलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको हो ।
स्वयम्भू परिसर आसपासमा जाँदा प्रहरीले सोधपुछ गरेको शाहले केटिएम दैनिकलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिहीबार म र केही साथी रिपोर्टिङमा गएका थियौँ । प्रहरीको असई प्रतिभा सिंहले पास देखा भनेर भनेपछि मैले सूचना विभागको सहित कार्ड देखाए । उहाँलाई त्यो कार्डले चित्त बुझेनछ । बिहान बिहान के को रिपोर्टिङ नि, कस्तो के रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ, बिहान बिहान कस्तो रिपोर्टिङ हुन्छ भनेपछि मैले रिपोर्टिङ के गर्ने भन्ने मेरो प्राइभेसीको कुरा हो भने ।’
त्यही भन्दा महिला प्रहरीले उनलाई एक झापड हानेको उनले बताए । सामाजिक दुरी काम गरेर काम गरिरहेको मलाई एक्कासि हात हाल्नु कतिको जायज हो, उनले भने ।
केटिएम दैनिकसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा शाहले भने ‘मलाई झापड किन हान्नुभएको भन्दा, मलाई भित्र ल्याएर लाठी समेत हान्नुभयो । अहिले म घाइते भएको छु । भित्र ल्याएर पनि मलाई बुट र डन्डाले हान्दै केरकार समेत गर्नुभयो ।’
कोरोनाको कहरमा सामाजिक दुरी कायम गरेर आफ्नो काममा हिँडेको मान्छेलाई यसरी तलाईँ हतकडी लगाउँछु भन्दै, थापा थरको प्रहरी जवानले बन्दुक तेर्साएर, धकेल्दै तँलाई ठिक पार्छु भन्दै डर देखाउनुले समाजमा कस्तो असर पर्ला ? उनले भने ।
मुस्कान सहितको प्रहरी भनेर सेवा दिने निकायले नि यसरी हातपात गर्नु कतिको उचित हो त ? उनले भने । यस्तै पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोसन पुरीले उक्त कार्यको भर्त्सना गरेका छन् । पत्रकार माथि हुने यस्ता अन्यायको विरुद्धमा आफू जस्तोसुकै परिस्थितमा पनि उभिने बताए ।